Mihodina ny CNC (Axis 2-12) - K-Tek Machining Co., Ltd.
Inona no azontsika omena?
K-Tek Precision Machining dia manome ny masinina miodina amin'ny alàlan'ny fandeferana henjana be. Ireo bara boribory vita amin'ny akora dia azo novokarina tamin'ny 1mm ka hatramin'ny 300mm. Amin'ny maha-ISO9001: 2015 sy ISO / TS 16949: 2009 ny orinasa mpamokatra faritra CNC voasoratra anarana, tsy vitan'ny hoe mifantoka amin'ny famokarana fa manome ihany koa ny ampahany tsara mihodina amin'ny CNC.
Na sarotra na lehibe toy inona ny vokatra, ny injenierantsika mahay dia afaka mamokatra azy ireo amin'ny fahamendrehana sy kalitao mitovy. Izay rehetra antenainao amin'ny milina fanodinana CNC farany dia azo vitan'i K-Tek Machining Co., Ltd.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Teknolojia farany mitodika any amin'ny CNC, mamokatra amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy, ny fiovana dia azo ahena sy fehezina amin'ny lavitra indrindra.
Inona ny fihodinan'ny CNC?
Ny CNC dia fehezin'ny solosaina, miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso fitaovana mandeha ho azy. Ny fitaovana boribory dia tazomina ao anaty chuck ary ahodina hanala ireo fitaovana hahazoana ireo singa. Ny fihodinan'ny CNC dia tsy vitan'ny famokarana boribory ivelany, fa azo ampiasaina amin'ny fantsom-boasary anatiny (izany hoe: fandavahana) fantsona hahazoana endrika maro karazana.
Manana milina fihodinan'ny CNC ho an'ny famokarana volavola kely sy lehibe isika miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra faritra avo lenta avy amin'ny savaivony 1mm ka hatramin'ny diameter 300mm. Ny ankabeazan'ny milina fihodinananay CNC dia misy fantsom-pamokarana fanampiny sy fitaovana hampiasana ny milina mandeha ho azy amin'ny faritra sarotra amin'ny dingana iray hanafoanana ny fikirakirana lafo.
• Ny fahamarinana amin'ny boribory sy ny concentricity dia azo tratra amin'ny +/- 0.005mm
• Azo tratra Ra0.4 ny fahasarotan'ny velarana.
• Diametran'ny bara boribory akora manomboka amin'ny 1mm ka hatramin'ny 300mm
• Fanodinana, famadihana-ary famokarana milina marobe ny CNC
• vy vy, Stainless vy, varahina, aliminioma ary plastika.
• Vondrona kely sy lehibe.
K-Tek dia afaka manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, vokatra mifandraika amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fitsaboana, angovo vaovao ary sehatra hafa. Nandalo ny fanamarinana ISO9001: 2015 izahay, manana mpiasa 200 izahay izao. Ny vokatray manodidina ny 20% aondrana any Japon, 60% aondrana any Eropa sy Amerika, afaka manome anao kalitao avo sy vidiny mifaninana izahay. Ny fitaovana iraisanay dia vy vy, aliminioma, varahina, vy ambany karbaona, plastika injeniera ary karazana vy hafa, Afaka manome fitsaboana hafanana sy fitsaboana isan-karazany ho an'ny mpanjifa koa izahay:
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Mihodina;
2) EDM Wire-cutting / WEDM-HS / WEDM-LS;
• Anodize (mahazatra / mafy)
• Zinc Plating (Mainty / Oliva / Manga /......)
• Chrome Plating (Inc.Hard)
• Volafotsy volafotsy / volamena
• Famafazana fasika / famafazana vovoka / fanatsarana gazy
• Famolavolana elektro / vovo- Plating / mainty / PVD sns.